မြေ့မြေ့ ကျွမ်းလောင်...အာဏာ ဆောင်တတ်
ဒုက္ခပူမိ... ရင် မချိလည်း
ယမ်းငွေ့ထဲမှာ... သက်စွန့်ရှာကြ ... သွေးမြေ ရဲရဲ ကျခဲ့တယ်.....။
ပြည့်ရဲ ဘဝ ကန္တာရ အတိ ၊ ရေမြေ အလှ ကန္တာရ အတိ
မသိ နိုးနား... အာဏာသား နဲ့
နောက်နွား တစ်သိုက်... ယမ်းငွေ့ တိုက်ခဲ့
ပြည်မှာ အဝှမ်း... လှိုက်လှိုက် လွှမ်းခြုံ... ပြောမကုန်ဘူး...။
ကြည့်လိုက်စမ်းပါ... သူသူ ငါငါ
နေရာ ဒေသ၊ ဌာန မရွေး
သတ္တိသွေးနဲ့၊ ဖွေးဖွေး ဒါးလှံ၊ အားမာန် သင်းပင်း
ပြင်၊ တွင်း၊ စည်း၊ ညာ.. စိတ် အသာစီး
ပြည်တွင်း ယမ်းငွေ့ ပြယ်စေသတည်း.....။
အမ် . နော်ဂျာ
၉. ၈. ၂၀၀၁